The Kpop Times Media - လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်မင်းသားတွေနဲ့ လက်ထပ်ခဲ့ကြတဲ့ နာမည်ကျော် မင်းသမီးများ
လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်မင်းသားတွေနဲ့ လက်ထပ်ခဲ့ကြတဲ့ နာမည်ကျော် မင်းသမီးများ
အောင်မြင်ကျော်ကြားတဲ့ ဒီမင်းသမီးတွေဟာ အောင်မြင်ကျော်ကြားတဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် မင်းသားတွေနဲ့ လက်ထပ်ခဲ့ကြပါတယ်။
သူတို့ဟာ လုပ်ငန်းတူထဲမှာအလုပ်လုပ်နေကြပြီး တူညီတဲ့အရာတွေအများဆုံးရှိပြီး တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ဆက်စပ်နိုင်ကြသလိုပဲ မကြာခဏဆိုသလို နာမည်ကျော်ကြားသူတွေဟာ အခြားနာမည်ကျော်ကြားသူတွေနဲ့ လက်ထပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ သူတို့ကတော့ ထိပ်တန်းမင်းသားတွေနဲ့ လက်ထပ်ခဲ့ကြတဲ့ ထိပ်တန်းမင်းသမီး ၈ယောက်ပါ။
1. Song Hye Kyo နဲ့ Song Joong Ki
Song Hye Kyo နဲ့ Song Joong Ki တို့ဟာ ၂ ယောက်အတူပါဝင်ခဲ့တဲ့ Descendants of the Sun ဒရာမာမှ တစ်ဆင့်တွေ့ဆုံပြီးနောက် ချစ်ကြိုက်ခဲ့ကြတာပါ။ သူတို့ဟာ ပရိသတ်တွေအချစ်ဆုံးအနုပညာရှင်စုံတွဲတွေ ထဲကတစ်တွဲဖြစ်လာပါတယ်။
2. Park Soo Jin နဲ့ Bae Yong Jun
မိန်းကလေးအဆိုတော်အဖွဲ့ဝင်ဟောင်းဖြစ်တဲ့ မင်းသမီး Park Soo Jin နဲ့ မင်းသား Bae Yong Jun တို့ဟာ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇူလိုင်လက မင်္ဂလာပွဲကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။ အခုအချိန်မှာ သမီးတစ်ယောက် ၊ သားတစ်ယောက်နဲ့ သာယာတဲ့မိသားစုလေးရရှိနေကြပါပြီ။
3. Lee Min Jeong နဲ့ Lee Byung Hun
Lee Min Jeong နဲ့ Lee Byung Hun တို့ဟာ ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှာလက်ထပ်ခဲ့ကြပြီး ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှာ သားလေး တစ်ယောက်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ အသက် ၁၂ နှစ်ကွာဟပြီး တကယ်ချစ်တတ်လာတဲ့အခါ အသက်အရွယ်ဟာ နံပါတ်တစ်ခုဖြစ်ရုံပဲဆိုတာကို သက်သေပြခဲ့ကြပါတယ်။
4. Kim Tae Hee နဲ့ Rain
Kim Tae Hee နဲ့ Rain ၅နှစ်တာတွဲခဲ့ပြီးနောက် ၂၀၁၇ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလမှာ လက်ထပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလမှာ ပထမဦးကလေးကို ရခဲ့ကြပြီး ဒုတိယကလေးကိုလည်း ကိုယ်ဝန်လွယ်ထားရပြီဖြစ်ကြောင်း လတ်တလောက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
5. Lee Bo Young နဲ့ Ji Sung
မင်းသမီး Lee Bo Young ဟာ ၂၀၀၄ ခုနှစ်က Save Last Dance for Me ဒရာမာရိုက်ကူးရေးမှာ မင်းသား Ji Sung နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှာ သူတို့၂ယောက်တွဲနေကြောင်း အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ မှာ မင်္ဂလာပွဲကျင်းပမယ့် အစီအစဉ်တွေကိုကြေညာခဲ့ပြီးနောက် စက်တင်ဘာလမှာ မင်္ဂလာပွဲကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။ ကလေး ၂ယောက်ရှိပြီး ဒုတိယကလေးဟာ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၄ရက်နေ့ကမွေးခဲ့တာပါ။
6. Lee Na Young နဲ့ Won Bin
Lee Jong Suk နဲ့အတူရိုက်ကူးတဲ့ Romance isaBonus Book အပါအဝင် ဒရမ်မာပေါင်းများစွာထဲက သူ့ရဲ့ အဓိကဇာတ်ဆောင်နေရာတွေအတွက် ကျော်ကြားတဲ့ မင်းသမီး Lee Na Young ဟာ တောင်ကိုရီးယား အနုပညာလောကမှ လက်ရွေးစင်မင်းသားတွေထဲကတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ မင်းသား Won Bin နဲ့ လက်ထပ်ခဲ့ပါတယ်။ အေဂျင်စီတစ်ခုတည်းရဲ့လက်အောက်မှာရှိတဲ့ သူတို့စုံတွဲဟာ ၂၀၁၅ခုနှစ် မေလက မင်္ဂလာပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပြီး သားတစ်ယောက်ရရှိခဲ့ပါတယ်။
7. Ko So Young နဲ့ Jang Dong Gun
တောင်ကိုရီးယားကိုယ်စားပြုအနုပညာရှင်တွေထဲကတစ်ယောက်ဖြစ်လာတဲ့ မော်လ်ဒယ် ၊ မင်းသမီး Ko So Young ဟာ တောင်ကိုရီးယားမှာ ထောက်ခံမှုအများဆုံးနဲ့ အနုပညာကြေးအမြင့်ဆုံးအနုပညာရှင်တွေထဲကတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ မင်းသား Jang Dong Gun နဲ့လက်ထပ်ခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၀ခုနှစ် မေလမှာ ဆိုးလ်မြို့က Shilla ဟိုတယ်မှာလက်ထပ်ခဲ့ကြပြီး အခု သားတစ်ယောက် ၊ သမီးတစ်ယောက်ရရှိထားပါတယ်။
8. Kim Nam Joo နဲ့ Kim Seung Woo
၂၀၀၅ ခုနှစ်မှာ လက်ထပ်ခဲ့ကြတဲ့ Kim Nam Joo နဲ့ Kim Seung Woo တို့ဟာ ဝါရင့်သရုပ်ဆောင်တွေပါ။ အိမ်ရှင်မကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့ ၈နှစ်ကျော် အနားယူနေခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း Kim Nam Joo ဟာ အနုပညာလောကထဲကို မင်းသမီးတစ်ယောက်အနေနဲ့ပဲ ပြန်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒီနာမည်ကြီးစုံတွဲမှာ ကလေး၂ယောက်ရှိထားပြီး သာယာတဲ့မိသားစုဘဝလေးပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။
ဖေဖော်ဝါရီလ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ထဲ GFriend ၊ Red Velvet, BTS ဘယ်အဖွဲ့က Top 1 မှာ ရှိနေတယ်ထင်လဲ
ဘ၀ အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ စိန်ခေါ်မှုတွေကို အသေးစိတ်ဖော်ကြူးထားတဲ့ BTS ရဲ့အမိုက်စား '' ON ''Music MV လာပြီ
BTS က တစ်ခုတည်းသော Idol အဖွဲ့ဖြစ်တယ် ဆိုတဲ့အချက်ကို Netizens တုံ့ပြန်ချေပ
စစ်မှုထမ်းဖို့ စာရင်းသွင်းလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ Seungri
Instagram မှာ Followers ၁၀ သန်းပြည့်ခဲ့တဲ့ Park Seo Joon
More in Others Section « ကံနိမ့်ခဲ့လို့ ဆိုးဆိုးရွားရွားစွပ်စွဲမှုတွေနဲ့ ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ အပြစ်ကင်းသူ Idol များ Ariana Grande နဲ့ အတူတွေ့ရတဲ့ BTS »